UPhohlongo weTS Galaxy usevivela ukuphohloza iChiefs 'ebakweletayo'
UPhohlongo weTS Galaxy usevivela ukuphohloza iChiefs ‘ebakweletayo’
Waphoxeka uMasilake Phohlongo ngesikhathi ephoqeleka ukuba ayogonqa angabe esaqhubeka nokudlala kwiBafana Bafana egcine iwine iCosafa Cup muva nje. UPhohlongo watholakala etheleleke ngeCovid-19 ngesikhathi kuqhubeka lo mqhudelwano eGqeberha.
Ujabule nokho ukuthi ozakwabo bakwazi ukuqhubeka nomsebenzi baze bagcina beyiqukulile indebe naye wayithola indondo. Uthi kuningi akufunde kwiBafana okuzomsiza kwiTS Galaxy kule sizini ezayo.
“Ngosuku lokuqala… ya, ozakwethu bangemukele ngathi ngiyiqhawe. Bekungumqhudelwano omuhle kakhulu. Ngebhadi angikwazanga ukuwuqeda, kodwa kuhle ngoba ozakwethu bakwazi ukugcina bewunqobile,” kusho uPhohlongo.
“Njengoba sengibuyile, ngizosebenzisa wonke amava engiwafunde eqenjini lesizwe ukusiza ngawo lapha eqenjini. Ngifunde izinto eziningi njengoba besidlala namaqembu ehlukene, sihlangana nabantu abehlukene,” kushp yena.
UPhohlongo ube nesizini enhle ngokudlule kanti usafisa ukuqhubeka lapho nakulokhu. Ungumdlali ovamise ukuvelela emidlalweni emikhulu kanti ufuna ukuqhubeka lapho uma sebebhekene neKaizer Chiefs abazovula ngayo kwiDStv Premiership.
“Uma ufuna ukuba sezingeni eliphezulu, kumele wenze kahle uma ubhekene namaqembu asezingeni eliphezulu. Kumele udlale kahle uma ubhekene nalamaqembu athathwa ngokuthi ngamakhulu.
“Yilapho uliveza khona ithalente lakho. Kumele uma umdlalo unzima kubonakale ubukhali bakho. Wonke umdlali enIngizimu Afrika ufuna ukudlala eqenjini elibhekene neKaizer Chiefs, Mamelodi Sundowns ne-Orlando Pirates.
“Nami kusukela ngisemncane ngangiphupha ngibhekene nePirates. Manje ukudlala nayo kwafana nokufezeka kwephupho kimi,” kuchaza uPhohlongo.
FUNDA NALA: UDolly kulindeleke aqede konke neChiefs kuleli sonto
“Ngicabanga ukuthi iqembu selikulungele ukudlala. Ngesikhathi ngifika lapha ngifice wonke umuntu ebonakala ukuthi usebukhali. IChiefs iyasikweleta, isikweleta kakhulu.
“Izofika sesiyilungele kahle. Sizobe sisekhaya ngakho kumele siqale kahle,” kuchaza lo mdlali owakhiqizwa yinkulisa ye-Ajax Cape Town. UPhohlongo usesindile kwiCoronavirus ngemuva kokugonqa, ulayela abantu ukuthi bazigade kuyo.
“Lento ikhona futhi iyabulala. Sicela nizigade, nihlale ekhaya niphephe. Hlala nomndeni ungaphumeli ngaphandle uma singekho isidingo salokho,” kusho uPhohlongo osesindile kulolu khuvethe.
Previous Previous post: Izibabuli ezintsha zeSundowns zijabule ngokwamukeleka eChloorkop
Next Next post: Unikwe ishumi uDolly kwiChiefs, isisayine no-Alexander